crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Kobciye | HimiloNetwork
Himilo September 30, 2018	Leave a comment 2,054 Views
Zakariya October 10, 2017	Leave a comment 3,378 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Tufaaxu wuxuu kamid yahay qudaarta shacbiyadda leh – waana mid wax fiican. Waa qudaar ay ku cabaysan tahay faa’iidooyinka ay garbinayaan cilmi-baaris lagu ogaaday. Halkan waxaan idin kugu soo gudbinaynaa 10 faa’iido oo Tufaaxu leeyahay. Tufaaxa waxaa ku jira nafaqo dheeri ah. Tufaaxu wuxuu u wanaagsan yahay dhimista culeyska jirka. Wuxuu u wanaagsan yahay wadnaha – waxaa ...
Zakariya May 23, 2017	Leave a comment 426 Views
Kuala Lampur (Himilonews) – Ra’iisul-wasaarihii hore ee dalka Malaysia, Tun Dr Mahathir Mohamad ayaa dadkiisa la wadaagay siraha ku duugan cimrigiisa ku dhow qarniga. Dr. Mahathir hadda wuxuu jiraa 91-sano. Wuxuuna talada dalka Malaysia soo hayay muddo dhan 22 sano. In kasta oo uu xilka ka degay sanadkii 2003, hadana wuxuu kaalin firfircoon ku yeelahay siyaasadda dalka. Wuxuuna hadda hoggaan u ...
Zakariya April 10, 2016	Leave a comment 598 Views
Muqdisho, Soomaaliya (HIMILONEWS) – Baamiyuhu wuxuu ka mid yahay Geedo Daaweedyada Cilmibaarista lagu sameeyay, wuxuuna leeyahay Faa’idooyinkaan soo socdo:- SONKORTA/MACAANKA:- Baamiyuhu wuxuu ugu horeeyaa Geedaha lagu daaweeyo Xanuunka Macaanka, Cilmibaarayaal tiro badan ayaa Geedkaan Xoogga saaray si ay uga Salgaaraan qaabka uu Macaanka ula Dagaallamo, waxayna qaar ka mid ah sheegeen inay Mustaqbalka Rajayn doonaan in Baamiyuhu gali doono Booska ...